Africa iyo COVID-19 talaalada - Amjambo Africa
Waxaa qoray: Jean Damascene Hakuzimana
Sideetan kun oo qaadasho oo ah tallaalka Johnson iyo Johnson ayaa yimid Koonfur Afrika Talaadadii, Febraayo 16, hal maalin ka dib Koonfur Afrika waxay ka bilawday talaalka shaqaalaha daryeelka caafimaadka Cape Town, taasoo rajo u horseeday dalka Afrikaanka ah ee ay aadka u waxyeeleeyeen COVID-19. Madaxweynaha Koonfur Afrika, Cyril Ramaphosa, ayaa ku tilmaamay imaatinka tallaalku inuu yahay mid muhiim u ah la-dagaallanka cudurrada faafa.
Ayadoo la isku dayayo in laga hortago macluumaad qaldan oo ku hareeraysan tallaalka, Madaxweynaha Ramaphosa, Wasiirka Caafimaadka Mkhize, iyo Kuxigeenka Wasiirka Caafimaadka Phaahla ayaa ka mid ahaa dadka la siiyay daawooyinka ugu horeeya Madaxweyne Ramaphosa wuxuu kula dardaarmay saaxiibadiisa Koonfur Afrika “Tan kor u qaad, si aan dhammaanteen u nabad qabno, oo aan dhammaanteen u caafimaad qabno. Koonfur Afrika waa dalkii ugu horeeyey ee tallaala tallaalka Johnson iyo Johnson.
Shirkadda weyn ee dhaqaalaha waxaa si ba’an u saameeyay COVID19, iyadoo in ka badan 48,000 ay u dhinteen fayraska, isbadalki dhowaanahanna wuxuu dalka ka dhigay mid aad u nugul. Si kastaba ha noqotee, Aljazeera ayaa ku warramaysa in tallaallada ay soo saareen Johnson iyo Johnson (57% waxtarka leh) iyo Novavax (50% waxtarka) ay caddeeyeen inay wax ku ool u yihiin noocyada.
Koonfur Afrika waxay xaqiijisay sagaal milyan oo qiyaasood oo ah tallaalka Johnson iyo Johnson ka dib markii ay joojisay heshiisyadii lagula jiray tallaalka Oxford / AstraZeneca, oo la ogaaday inuu waxtar yar u leeyahay noocyada cusub. Waddanku wuxuu rajeynayaa inuu tallaalo ugu yaraan 67% (40 milyan) oo dadkiisa ah dhamaadka sanadka, wuxuuna xaqiijiyay 20 milyan oo qaadasho oo ah tallaalka Pfizer-BioNtech si looga caawiyo inay sidaas sameyso.
In yar oo ka mid ah waddamada kale ee ku yaal Qaaradda Afrika ayaa leh qorshooyin tallaal oo sidan oo kale ah. Taabadalkeed, waa inay sugaan COVAX – iskaashi caalami ah oo loogu talagalay in lagu damaanad qaado helitaanka sinnaanta ee tallaalada dalalka saboolka ah – si loogu dhawaaqo qorshooyinka qaybinta..
Rwanda waxay bilawday barnaamijkeeda talaalka 14-kii Febraayo, sida ay qortay wakaalada wararka ee Reuters. Maalintii xigtay, Madaxweynaha Emerson Mnangagwa ee Zimbabwe ayaa bartiisa twitter-ka ku shaaciyay imaatinka 200,000 oo qiyaas oo tallaal ah oo ay soo saartay shirkadda dawooyinka ee Shiinaha ee Sinopharm. Zimbabwe waxay sheegtay inay u qoondeysay 100 milyan oo doolar soo iibinta tallaalka. Algeria, Morocco, Mauritius, iyo Masar ayaa iyaguna bilaabay inay talaalaan muwaadiniintooda.
kasta oo dalalka miisaanka culus ay heshiisyo laba geesood ah la galayaan shirkadaha soo saara tallaalka, haddana Ururka Caafimaadka Adduunka waxa uu ka digayaa in heshiisyadan ay ka dhigayaan tallaalka COVID-19 mid aan la geli karin oo aan la gaari karin dalalka saboolka ah ee Afrika. The Independent ayaa ku warantay in Dr Matshidiso Moeti, oo ah Agaasime Gobaleedka Afrika ee Hay’ada Caafimaadka Aduunka, uu ka digay in masiibada lagu soo afjari doono \_”Anaga-koowaad halkii aan ka ahaan lahaa Me-First\_”. Barnaamijka COVAX wuxuu qorsheynayaa inuu soo diro 1.3 bilyan oo qiyaasta tallaalka ahilaa 92 dhaqaalaha dhaqaalahoodu hooseeyo dhamaadka 2021.
Countries Wadamada qaar ma tusin inay daneynayaan dejinta barnaamijyada talaalka. Madaxweynaha Tanzania John Magufuli ayaa diiday tallaalka COVID-19. Dhanka kale, Codka Mareykanka ayaa ku waramaya in Seif Sharif Hamad, oo ah madaxweyne ku xigeenka Jasiirada Zanzibar ee Tansaaniya, uu dhintey 17-kii Febraayo ka dib todobaadyo uu la dagaalamayey COVID-19.
PreviousMaine Credit Union Faa’iidooyinka Cashuur xareynta Hore
NextMa waxaad raadineysaa deeq waxbarasho? U diyaargarow hadda si aad u noqotid tartame sare